Hadiyadaha Kirismaska ​​ee Adobe: Boqolaal Muuqaallo Sawire ah oo Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Astaamaha
Hagaag, Adobe wuxuu noogu yimaadaa hadiyad Kirismas ah Tanina waa tan 10 illaa 14 waxaad awoodi doontaa inaad kala soo baxdo taxane ah astaamaha kirismaska ​​si bilaash ah. Haa, xitaa uma baahnid inaad ku gasho koontadaada Cloud Cloud. Waxaad aadeysaa xiriiriye iyo soo dejisan.
Taxane ah astaamaha kirismaska ​​iyo sawir gacmeedyada oo waliba ay kujiraan animations kaas oo aad ku noolaan kartid bandhigga shabakadahaaga. Soo jeedin dhan oo Adobe ah oo timid iyadoo lala kaashanayo Iconfinder.
Noocyada 'icon' ee 'animated' ee 'Adobe' ee bilaashka ah ayaa la habeeyay bogga Weekoficons laga bilaabo 10-ka illaa 14-ka Diseembar iyada oo qayb ka ah hadiyad loo yaqaan toddobaadka icons.
Astaamahan weyn midab leh oo aad ufiican iyagu waa cudurdaarka ugu fiican ee aad "ku aragto" websaydhkaaga xilliga Kirismaska ​​si ay macaamiishaadu si fudud kaaga faquuqaan sababtoo ah sida ay u fiican yihiin.
Waxa aan kugula talineyno inaad soo dejiso dhammaantood, tan iyo waad isticmaali kartaa markasta oo aad rabto. Iyo inbadan markaad haysato labadaba qaababka SVG iyo PNG. Marka ma jirto wax cudurdaar ah oo lagu joojiyo boggaas soo degsashada ah.
Waa usbuucaas oo ah astaamaha #WeekofIcons halkaas oo khubarada animationku ay sharxayaan tabaha iyo shaqada la qabtay. Sidoo kale waxaad ka heli kartaa casharro maalin walba. Xusuusnow inaad dhaafto xiriirkan.
Sideed u awooddaa ka arag GIF-yada la wadaagoIyagu waa kuwo tayo sare leh oo aad u firfircoon si ay u abuuraan kuwa animations meertada ah kuwaas oo u oggolaanaya iyaga in la dhigo meel kasta oo ka mid ah boggayaga internetka.
Ha iska jarin oo ha soo dejiso wax walba, maadaama aad gacanta ku hayso boqolaal astaamo dhammaan noocyada naqshadeynta ee loogu talagalay websaydhkaaga. Sida abuuristaada moodello sawir ah oo qalabkan ah in aan kula wadaagno, ilo kale oo web ah oo tayo iyo muhiimad weyn leh si looga fogaado in sanduuqa la dhex maro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Soo qaado astaamaha kirismaska ​​ee xayeysiinta bilaashka ah ee Adobe ee SVG iyo PNG labadaba